Authentic Storytelling Masterclass – Download Myanmar
Home>>Business>>Authentic Storytelling Masterclass
May 7, 2021 160 Views0
Storytelling ဆိုတာ Marketer တွေအတွက်ရော Business မှာပါ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဘာကိုရောင်းသလဲ ဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာ Story ကိုပြောနေသလဲ ဆိုတာက ရင်ထဲကို ပိုရောက်စေတယ်။ ဒီ Class က Storytelling ပိုင်းကို သင်ပေးတဲ့ class ပါ။ CXL Class တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း pdf များများ နဲ့ video တစ်ဖိုင်ပဲပါပါတယ်။
his step-by-step masterclass will show you how to find and grow your tribe. We’ll teach you how to speak to your audience and buildalegion of engaged followers by effectively telling your story and creating brand ambassadors.
Related tags : BusinessStorytelling